Infographic miaraka amin'ny antony rehetra ilainao hifantohana amin'ny finday | Martech Zone
Nandany fizarana vitsivitsy izahay Edge an'ny Radio Web mitory amin'ny mpihaino ny maha-zava-dehibe ny finday. Matetika izahay miresaka momba ny marketing amin'ny finday fa rehefa nipetraka tao amin'ny gara aho niady hevitra momba ilay seho niaraka tamin'i Erin Sparks of Paikady momba ny tranokala, tena nanomboka nahatakatra ahy ny fiovan'ny fitondran-tena mitsikera mifototra amin'ny fiainako manokana.
Androany hariva aho dia nanoratra namako sakaiza iray nitaraina fa tsy ny mailaka nataony mamaly ny finday ary tsy afaka namaky azy io tamin'ny findaiko aho. Raha tsy voatsara ny mailakao, mety hisy ve hitaraina? Sa tsy hiraharaha azy io fotsiny izy ireo na hamono izany?
Herinandro vitsivitsy lasa izay tamin'ny antsika podcast ity, Nitanisa fihetsika am-polony mahery izay fanaonay natao tany ivelan'ny finday hatrizay izahay fa nifindra tany an-tananay daholo izany. Antso an-telefaona, fandefasan-kafatra, fakantsary, fanairana, fanairana amin'ny kalandrie, varotra, sarintany, horonan-tsary, banky, lalao, sosialy, fanaraha-maso ara-pahasalamana, tapakila, fandoavam-bola, fakana vola, fikarohana, fandefasana mailaka, firaketana horonantsary…
Erin dia naneho hevitra tamiko momba ny halehiben'ny lisitra. Nahita izany fotsiny aho tamin'ny famakafakana ny asako manokana tontolo andro. Ary io lisitra io dia mitombo hatrany satria ny rindranasa finday ary ny rahona dia manohy manompo ahy izay ilaiko rehetra. Ny fitaovan'ny findaiko dia manandanja ny fahombiazan'ny orinasako, ny fifandraisana amin'ny fianakaviako, ary ny fitantanana ny asako isan'andro sy ny fiainako an-trano. Tsy azoko antoka hoe inona no hataoko raha tsy misy ny findaiko! Mangovitra aho mieritreritra an'izany!
Tsy izaho irery - toa nandeha nihetsika izao tontolo izao ary mila miaiky ny orinasa fa efa eo ny mpanjifany… na dia tsy ny orinasany aza!
Tags: finday mpampitohyDK New Mediasisin'ny radio webbilaogy teknolojia marketingMMSfanairana findayFivarotana finday sy tablettefinday bankyfanairana kalandrie findayfakan-tsary findayfifanakalozana findayfihetsiky ny mpanjifa findayfihetsiky ny mpanjifa findayfandefasana mailaka findaylalao findayfanaraha-maso ny fahasalamana findayfinday infographicfaktiora findaysarintany amin'ny findayfinday-barotramozika findayfandoavam-bola amin'ny findayfikarohana amin'ny findaysosialy findayfandefasana hafatra amin'ny findaytapakila findayLahatsary findayfandraketana horonan-tsary findayantso an-telefaonapaikadin'ny tranonkalaSMSfandefasana hafatra an-tsoratra
Sweetspot: Dashboard nomerika voalohany, finday alefa amin'ny alàlan'ny workflow